Doorashada Maraykanka Iyo Madaxweyne John Biden.WQ/ Hassan Osman Ismael
Monday November 09, 2020 - 16:01:47 in Maqaallo by Wariye Tiriko
John Biden ayaa ku guulaystay Doorashooyinkii USA, dad badan oo ku nool Caalamka islamka ama caalamka Saddexaad ayaa kala jaclaysanaya labada nine ee ku tartameyey Xukunka Maraykanka.
Waxa dadbadan ka maqan in aanay labada nin waxba kukal duwanayn. Ameerica wax ka taliya koox qudha oo layiraaho maansooniya (freemasonry)). Labada xisbiba iyakaa u dejiya siyaasaada arimaha debedda ee ay ku soconayaa. Waxaana lookala qaybiyey Dhinaca Midig iyo Dhinaca Bidix. Labadodana waxa u dhexeeyaa kama badna 10%
Sida muuqata Drum wuxu lahaa caqliyad Baayacmushtar, sidaas aawadeed ayaanu u qaadin dagaalo badan oo aduunka ah, laakiin wuxu ku koobsan jiray in uu Carabta Baad ka qaado, China dagaal Baayacmushtar lago, Yurub ku khasbo in ay kordhiyaan kharashka kaga baxaya difaaca NATO , In uu kabaxo ururo badan oo lacago kaga bixi jireen sida ladaggaalka Cimilada, Ururka caafimaadka aduunka iyo qaarkale.
Bidenna wuxu leeyahay Caqliyad Askarinomo. Wuxu kutaamayaa in uu xoojiyo NATO si uu ruushka culays u saaro, farageliyo meelo badan oo dagaallo ka socdaan sida Yaman, Armina-Aserbajan, arinta Libiya, south Kuriya iyo xiisadda kasoo korodhay Badda Cas.
Waxba yaan loo kala riyaaqin waa shilin labadiisii dhinace.